Wax kabaro Xuubka fudud ee Bikaarada iyo inay Gabadha bigro dhab ah tahay. | Gaaloos.com
Home » galmada » Wax kabaro Xuubka fudud ee Bikaarada iyo inay Gabadha bigro dhab ah tahay.
Wax kabaro Xuubka fudud ee Bikaarada iyo inay Gabadha bigro dhab ah tahay.
Waxaan markasta ku dadaaleeynaan in aan u soo tabin akhristayaasheena iyo daawadayaasheena sharata mu dan in aan u soo tabino,Hadaa nahay Shabakaga Sahal24 waxa kasta oo nolosha ku taxaluqa anagoo ka eegeyba hadba sida ay xasaasi u kala yihiin u muuruhu, Haddab Dhaqtaraadaan Ayaa noo shar xeysa Xuubka Bigrada iyo hadba sida uu Dunarka ugu kala xoog badan yahay.
Markii aan dharka ka dhigay waxa ii muuqatay caloosheeda buuran. Kolkii aan ninkeedii weydiiyayna waxa uu ii sheegay inuu qabo muddo ku dhow sanad, maalmahaan dambese ay billowday inay caloosha ka sheegato, isaga oo intaasi ii raaciyay “Waxaan u maleynayaa inay uur 5-6 bilood ah leedahay”.
Gabadha kolkii aan baaray waxa ii caddaatay in uusan jirin wax uur shan bilood ahi, balse ay jiraan wax aan garan waayey. Waxaan markaasi baaray ilma-galeenkii, saa dhabtii baa qorraxda ka caddaatay oo aad iiga nixisay. Cambarkawaxa ku dahaaran dub dhumuc weyn oo balaastiig ah, kolkii aan farta ku riixayna si sahal ah u duusmay,
waxayna farteeydu ku sigatay inay gaarto luqunta ilma-galeenka oo uusan u dhexeyn waxaan xuubkaasi ahayni. Ninkii baan weydiiyay waxa uu ka xusuusto habeenkii aqalgalka, wuxuuna iigu jawaabay “Habeenkaa xaaskeyga waan u tegey, wax dhiig ahise kama imaan, ha yeeshee kama aanan shakiyin maadaama ay ahayd ilmo yar oo aan weli caqliyaysan”.
Markaas baan ninkii u sheegay in naagtiisu ay weli bekro tahay ayna ku dhalatay xuub bekro dhumuc weyn oo owdan, waxa caloosheeda ka buuranina uu yahay dhiiggii caadada oo bilba bisha ka dambeeysa ku ururayey, meel uu dibadda uga soo baxana la’aa.
Title: Wax kabaro Xuubka fudud ee Bikaarada iyo inay Gabadha bigro dhab ah tahay.